खान नजाने बिष नै बन्ने रहेछ दहि, यी कुरा ख्याल गर्नै पर्छ - यादका टुक्रा
खान नजाने बिष नै बन्ने रहेछ दहि, यी कुरा ख्याल गर्नै पर्छ
दही स्वादिलो पेय । दही गुणकारी पनि । दही सेवन गर्दा स्वास्थ्यमा अनेक लाभ मिल्छ । तर, दही खाने समय र तरिकामा भने ख्याल गर्नुपर्छ । किनभने दही गुणकारी हुँदाहुँदै पनि यसको सेवन गर्ने विधि र समय थाहा नहुँदा यो विषाक्त बन्न पुग्छ । दहीको अर्युवेदिक महत्व छ । यो स्वाद र स्वास्थ्यका लागि मात्र होइन, सौन्दर्यका लागि पनि उत्तिकै उपयोगी मानिन्छ । दहीमा केहि यस्ता तत्व हुन्छ, जसले पाचन क्रियालाई चुस्त राख्न सहयोग गर्छ । तर, आर्युवेदले भन्छ, दही राती सेवन गर्नु हुँदैन । किन त ?
यसका केही कारण छन्, – राति दही खाँदा पाचन क्रियामा गडबडी पैदा हुन्छ । यसलाई पचाउनका लागि इनर्जी बर्न गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । धेरै मानिसहरु राति खाएपछि सुतिहाल्छन् । यसले झन् समस्या हुन्छ । – राति दही सेवन गर्दा शरीरमा इन्फेक्सनको डर हुन्छ । यसले रुघा र खोकी लाग्न सक्छ ।
यसका साथै कतिपय अवस्थामा दही हानिकारक हुनसक्छ । वा त्यसले पोषण होइन, विषको काम गर्न सक्छ । जस्तो कि, –शरीरको कुनै भाग सुन्निएको छ भने राति दही कदापि खानु हुँदैन । यसले सुन्निएको झन् बढ्छ । –घुँडा वा जोर्नीको दुखाईबाट पिडित भएको अवस्थामा दही सेवन उपयोगी हुँदैन । अन्यथा यसले दुखाईलाई झनै बढाउनेछ । –हामी दहीमा विभिन्न मिश्रण बनाएर सेवन गर्छौं, खासगरी डिजर्टको रुपमा । तर, थरीथरीका फलफूल दहीमा मिसाउँदा त्यो विषाक्त बन्न सक्छ ।
दही कहिले, किन र कसरी खाने ? – दही खाने उपयुक्त समय विहान हो । हात–गोडाको जलन, पेटको इन्फेक्सन, अपच, भोक नलाग्नु, कमजोरीका साथै अरु पनि थुप्रै समस्याहरु बिहान दही सेवन गर्दा ठीक हुन्छ । नास्तामा एक कचौरा दहीमा सख्खर मिलाएर खाँदा शरीरमा रगत बढ्छ । यसमा यस्ता रसायनिक पदार्थ हुन्छन् जसले गर्दा यो दूधभन्दा चाँडै पच्छ पनि । अपच, कब्जियत, ग्यास जस्ता पेटको समस्या भोगिरहेका व्यक्तिलाई दही वा त्यसबाट बनेको लस्सी, मोही आदिको उपयोग गर्नु फाइदाजनक हुन्छ ।
दही खाँदाका फाइदा –राति निद्रा नलाग्ने समस्या छ भने दैनिक खानाका साथ एक कचौरा दही सेवन गरौं । –दहीको नियमित सेवन शरीरका लागि अमृत समान मानिन्छ । यसले रगतको कमि तथा कमजोरी हटाउँछ । दूधले जब दहीको रुप लिन्छ, यसको सुगर एसिडमा बदलिन्छ । यसबाट पाचनमा मद्दत मिल्छ । भोक कम लाग्ने व्यक्तिहरुलाई दहीले एकदम फाइदा गर्छ । –दहीको मोही वा लस्सी बनाएर पिउँदा पेटको गर्मी शान्त हुन्छ । पेटमा गडबडी हुँदा दहीमा विीरे नुन हालेर खाँदा पनि फाइदा हुन्छ ।
–अमेरिकी आहार विशेषज्ञहरुका अनुसार दहीको नियमित सेवन गर्दा आन्द्राको रोग तथा पेट सम्वन्धी रोगहरुबाट छुट्कारा मिल्छ । –दहीमा मुटुको रोग, उच्च रक्तचाप, तथा गुदाको रोगहरुलाई बिसेक पार्ने गजबको क्षमता हुन्छ । यसले कोलस्ट्रोल बढ्नबाट रोक्छ र मुटुको धड्कनलाई ठीक राख्छ । –दहीमा क्याल्सियम अधिक मात्रामा पाइन्छ । यो हड्डीहरुको विकासमा सहायक हुन्छ । साथै, दाँत, ता नङलाई पनि बलियो बनाउँछ । –पायल्स रोगबाट पिडित व्यक्तिहरुले दिउसो भोजनपछि एक गिलास मोही पिउँदा फाइदा मिल्छ ।
Don't Miss it खुल्यो रहस्य, यति ट्रिक लगाए घरमा श्रीमानलाई काम लाउन सकिन्छ
Up Next दशैँमा मिठो परिकार बनाउने काइदाका सजिला उपायहरु
5 months ago 811 Views
यति कुरा गरेमा आफ्नो तौल आफैले सजिलै घटाउन सकिन्छ
मोटोपन बढेको बढ्यै छ । चिकित्सकहरु भन्छन्, ‘मोटोपनले अनेक रोग पैदा गर्छ ।’ मोटोपन कसरी घटाउने त ? यसका लागि…
10 months ago 434 Views
गृहिणीहरूचाहिँ मेसिन होइनन्, यसरी गराउने उनलाई विश्राम
गृहिणीहरू परिवारका केन्द्र हुन् । आफूलाई भन्दा आफ्ना परिवारका सदस्यहरू बालबच्चा, श्रीमान् तथा सासूससुराको हेरचाहमा तल्लीन भएर लाग्ने गृहिणीहरू गृहस्थीको…
बच्चालाई बुद्धिमान र चलाख बनाउन चाहनु हुन्छ भने लोरी गाएर सुनाउनुहोस्,
बच्चालाई सुताउने बेलामा विभिन्न कथा सुनाउने प्रचलन नेपाली समाजमा पहिलेदेखि नै चल्दै आएको हो । यद्यपि पछिल्लो समय प्रविधिको विकाससँगै…